ဂျပန်လူမျိုးများ ထမင်းစားစဉ် ရေသောက်နည်းရခြင်းအကြောင်းအရင်း - ONE DAILY MEDIA
ဂျပန်လူမျိုးများ ထမင်းစားစဉ် ရေသောက်နည်းရခြင်းအကြောင်းအရင်း
သင်အနောက်နိုင်ငံရှိစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုသို့သွားလျှင် ရေခဲနှင့်သံပုရာအစိပ်ပါသောဖန်ခွက်ကြီးတစ်ခွက်ကိုချပေးလေ့ရှိသေယ်လည်း ဂျပန်တွင် တော့ အလွန်သေးငယ်သည့်ရေခွက်ကိုသာရရှိပါလိမ့်မယ်။ဂျပန်လူမျိုးများကရေသည်သင်၏“ အစာခြေဖျက်မှု” ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်ဟု ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ရေဓာတ်မှန်ကန်မျှတနေခြင်းဟာ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟုထင်ရသော်လည်းအစာစားပြီးတိုင်းရေတစ်ဖန်ခွက်သောက်ခြင်းက ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအစာစားနေစဉ်ရေသောက် လေ့ရှိကြပါတယ်။ သို့သော် ဒီအလေ့အထဟာ ကမ္ဘာ့အကျန်းမာဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဂျပန်နဲ့ ဘာကြောင့်မတူညီတာလဲဆိုတာကို သုတေသနလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆောင်းပါး၏အဆုံး မှာတော့ အကျိုးရှိစေမည့်အချက်အလက်တချို့ကို သင်ရရှိနိုင်မှာပါ။
ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပုံရသော်လည်းအစာစားပြီးတိုင်းရေတစ်ခွက်သောက်ခြင်းဟာ တံတွေးကိုခနိးခြောက်စေနိုင်ပါတယ်။ အချို့ကရေထဲသို့သံပုရာသီးတစ်ခြမ်းထည့်ပေးခြင်း ကြောင့်လည်း တံတွေးထုတ်လွှတ်မှုကိုထိခိုက်စေသောအက်စစ်ဓာတ်ပါသောအရည်ဖြစ်စေပါတယ်။တံတွေးဟာ ခံတွင်းပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်ကျန်းမာစေသော အရည်အဖြစ်သုံးသောကြောင့်ပါးစပ်ခြောက်‌ သောအခါ ခံတွင်းနံ့ဆိုးခြင်းအပါအဝင်မနှစ်မြို့ဖွယ်လက္ခဏာအချို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။။ သံပုရာရည်ဟာ အက်ဆစ်ဓါတ်များကဲ့သို့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအချို့ကိုပိုဆိုးစေနိုင်ပြီးသွားကြွေလွှာကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
ထမင်းစားပြီးရေသောက်သောအခါသင်၏တံတွေးဟာ အရည်ပျော်သွာပြီး အစာချေဖျက်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသောအစာ‌ချေရည် ထုတ်လွှတ်မှုကိုထိခိုက်စေပါတယ်။။ ရလဒ်အနေဖြင့် အစာအိမ်ဟာ အစာချေဖျက်ရန်အားနည်းသွားပြီး ဗိုက်တင်းကားခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
(၃) အာဟာရစုပ်ယူမှုကို နှေးကွေးစေခြင်း
အစာစားနေစဉ်ရေသောက်ခြင်းဟာ သင်၏အစာချေရည်များ၏ ပြင်းအားကို နည်းစေသောကြောင့် အစာအိမ်၏ ပုံမှန်အချဉ်ဓာတ်ကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ထိုမှတစ်ဆင့် အစာခြေစနစ်ကိုထိခိုက်စေပြီး သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှ ဗီတာမင်နှင့်အာဟာရဓာတ်များကိုစုပ်ယူမှုကိုလည်း နည်းစေပါတယ်။
အစားအစာများ စားပြီး ရေသောက်ခြင်းဟာ အစာအိမ်ကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စေပြီး ဖိအားကြီးမား‌ စေပါတယ်။ထို့ကြောင့် အချို့သောကျန်းမာရေးအခြေအနေများကိုပိုဆိုးစေနိုငိပါတယ်။ ရေသောက်များခြင်းကြောင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အားအစာခြေအင်ဇိုင်းများလျော့နည်းစေပြီး ရင်ပူခြင်းအပါအ၀င် အခြားကွင်းဆက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတချို့လဲ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အစာကိုကောင်းစွာမချေဖျက်နိုင်ခြင်း‌ကြောင့် အဆီအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးကိုယ်အလေးချိန်ပိုတက်စေနိုင်ပါတယ်။ အစာစားပြီးရေသောက်ခြင်းဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အား Insulin Hormone လည်း ပိုမိုထုတ်လွှတ်စေပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်၌အဆီသိုလှောင်ရန်အခွင့်အလမ်းများ ပိုများလာစေပါတယ်။
BONUS : ရေသောက်ခြင်းကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ ??
အငန်ပါသောအစားအစာများကိုလျှော့စားပါ။ ဆားဟာ သင့်ကိုရေဆာစေသောကြောင့်ဆိုဒီယမ်နည်းသောအစားအစာများကိုရွေးချယ်ရပါမယ်။
သင်၏အစားအစာကိုဝါးရန်အချိန်ယူပါ။ ကြေညက်သော အစာသည်အစာအိမ်ကိုအစာ ခြေလွယ် စေပါတယ်။သင်ဝါးသည်နှင့်အမျှသင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်တံတွေးပိုထွက်လာပြီးရေသောက်ချင်စိတ် လျော့ကျစေပါတယ်။
အစာမစားခင်မိနစ် ၃၀ အလိုမှာရေသောက်ပါ။ အစာမစားခင်နာရီဝက်အလိုမှာရေများများသောက်ခြင်းကရေဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုပါပဲ။ ကယ်လိုရီအနည်းငယ်သာစားသုံးခြင်းဖြင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းညှိပြိးသား ဖြစ်နေပါမယ်။
အလောတကြီးမစားပါနဲ့။ အလောတကြီးစားပြီးရေနဲ့မျှောချတာ ကောင်းသောအကျင့်မဟုတ်ပါဘူး။
သင် ရော ထမင်းစားနေစဉ်ရေသောက် လေ့ရှိပါလား။ ရေ မသောက်ပဲရော ထမင်းတစ်နပ်စာလုံးစားနိုင်ပါလား ???
ရာစုနှစ်တစ်ခုနီးပါး အသက်ရှည်ကျန်းမာနေကြသော ဟောလိဝုဒ်အကျော်အမော် (၁၅)ဦး